မစံပယ်၏ ၀ဋ်ကြွေးများ (၁)
စင်ကာပူစရောက်တော့ အကူအညီလှမ်းတောင်းထားရတဲ့ အသိအစ်ကိုတစ်ယောက်က အခန်းငှားပေးထားတယ်..။ သုံးယောက်ခန်းမှာပဲ ရတယ်တဲ့..။ ကျောင်းတက်ချင်သေးတာဆိုတော့ ကျောင်းနဲ့နီးတဲ့နေရာ ငှားပေးတာတဲ့..။ ဟုတ်ကဲ့..။ ရပါတယ်ပေါ့..။ လူတော့များတယ်တဲ့..။ ပြီးမှ ပြန်ပြောင်းတဲ့..။ သူတို့အခန်းထပ်ရှာပေးမယ်တဲ့..။
ကိုယ်ကလည်းအကြောင်းမကောင်းခဲ့လို့ နေပါလိမ့်မယ်..။ ပထမရောက်ကာစ အတူနေရတဲ့ ညီအစ်မနှစ်ယောက်နဲ့က အဆင်ပြေသေးတယ်ပြောရတယ်..။ ကိုယ်အိပ်နေတုံး ခြေထောက်တက်နင်းခံရတာကလွဲလို့ပေါ့လေ..။ ကိုယ်နဲ့အတူနေပြီးသုံးလလောက်အကြာမှာ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ပြောင်းသွားတော့တယ်..။ သူတို့ပြောင်းသွားပြီးတာနဲ့ ဟိုဘက်ခန်းက နှစ်ထပ်ကုတင်နဲ့လေးယောက်နေတဲ့အခန်းက တစ်ယောက်ပြောင်းလာတဲ့..။ နောက်တစ်ယောက်က မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်လာရှာကာစ တစ်ယောက်..။ ကိုယ်ကအသက်အကြီးဆုံးဆိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံကရောက်လာကာစတစ်ယောက်ကိုလည်း သေချာဖေးမတယ်..။ စာကြည့်စားပွဲက ကိုယ့်မှာပဲရှိတာလေ..။ ဒါနဲ့ ညီမလေး..၊ အစ်မက စာအပြင်သွားကြည့်တာက များတယ်..။ အစ်မစားပွဲပေါ် လက်တော့သုံးချင်လည်းရတယ်နော်လို့ ကူညီပေးလိုက်တယ်..။ သူက အလယ်ကုတင်က..။ သူ့မှာ ဘာမှ အပိုတင်စရာမရှိဘူး..။ ကိုယ်က ပြတင်းပေါက်ဘေးက..။ စာကြည့်စားပွဲက ကိုယ့်ခြေရင်းမှာ..။ ကိုယ်ကကျောင်းတက်တဲ့သူဆိုတော့ အိမ်ပိုင်ရှင်က မသုံးဘဲထားတဲ့စားပွဲရှိတယ်...။ ကိုယ်ဘာသာယူသုံးဆိုလို့ လုံချည်တန်းတွေအောက်က စားပွဲသွားထုတ်..၊ ဖုံသုတ်ပြီးသုံးရတာ..။ကိုယ်မရှိတုံး သူသုံးပေါ့..။ သူလည်း အလုပ်ရှာနေဆဲဆိုတော့လေ..။
ဟိုဘက်ခန်းကနေ ဒီဘက်ခန်းရွှေ့လာတဲ့တစ်ယောက်ကလည်း ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်တယ်လေ..။ သူက စင်ကာပူရောက်တာ ၄ နှစ်ရှိပြီတဲ့..။ သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ အခန်းထဲသုံးယောက် စ စုံတုံး ညီမတို့လို့ အစ်မစာကြည့်ရင် အပြင်ထွက်ကြည့်ပေးမယ်..။ ညီမလေးတို့ အိပ်ချိန်ရောက်ရင်ပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်..။ ကိုယ်ဆိုလိုတာက ၁၀ နာရီ ၁၁နာရီပေါ့..။ အိမ်သူကြီးလုပ်သူက ဒါတွေ သူတို့တာဝန်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ညှိမပေးပါဘူး..။ ကိုယ်ဘာသာညှိပါလို့ ဆိုပါတယ်..။ လူစုံကာစ ၇ နာရီ ၈ နာရီလောက်မှာပြောလိုက်တာ..။ ည ၉ နာရီခွဲလည်းရောက်ရော ဟိုဘက်ကရွှေ့လာတဲ့တစ်ယောက်က ဖျတ်ကနဲ့မီးပိတ်ပြီး အိပ်တော့မယ်တဲ့..။ သဘောက အပြင်ထွက်ကြည့်တော့ပေါ့..။ အလယ်ကုတင်က အလုပ်လာရှာကာစတစ်ယောက်ကလည်း ကုတင်ပေါ်လှဲရက် ရုရှားနဲ့ချက်နေတယ်..။ မြန်မာနိုင်ငံက ချက်ခဲ့ရတာ အားမရ...၊ စင်ကာပူရောက်မှ အတိုးချချက်နေတော့တယ်..။ သူလည်း ချက်လက်စကြီး..။ ကိုယ်လည်း စာကြည့်လက်စကြီး..။ စိတ်က အဲဒီမှာ မျက်သွားပေမယ့် စာကြည့်တုံးစိတ်မတိုချင်တာနဲ့ အပြင်ထွက်ခဲ့ရပါတယ်..။ ကိုယ်ကလည်း မြန်မာနိုင်ငံကလာကာစ သည်းခံတတ်တယ်ပေါ့..။ အပြင်မှာလည်း ထမင်းစားစားပွဲတစ်ခုပဲရှိတာ..။ တစ်ခြားလူတွေ ထမင်းစားလို့ မပြီးကြသေးဘူး..။ ထမင်းစားပွဲကလည်း မအားဘူး..။ အဲဒါနဲ့ အောက်ဆင်းပြီးစာကြည့်ရပါတယ်..။
စာကြည့်ပြီး ၁၂ နာရီ.. ၁ နာရီရောက်မှ အပေါ်ပြန်တက်ရပါတယ်..။ ကိုယ်တက်တော့ တစ်အိမ်လုံးအိပ်ကြပြီဆိုတော့ အသံမမြည်အောင် သတိထားလုပ်ပါတယ်...။ ဘယ်မီးမှလည်း မဖွင့်ပါဘူး..။ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ တန်းအိပ်တာပါပဲ..။ ညမှာညဉ့်နက်တဲ့ကိုယ်က မနက်လည်း မထနိုင်ဘူးပေါ့လေ..။ ကျောင်းတက်တဲ့စားရိတ်က အရမ်းကြီးတော့ စာမေးပွဲကျမှာ ကိုယ်ကလည်းကြောက်..။ မနက်လည်းလင်းရော အလုပ်သွားဖို့ပြင်ဆင်တာဆိုပြီး မီးတွေဖွင့်တော့ ကိုယ်ကအိပ်နေတုံး မီးအလင်းမျက်စိထဲဝင်တော့ ဆတ်ကနဲ့နိုးပြီး ကိုယ်ကခေါင်းတွေကိုက်တော့တာပဲ..။ ဖုန်းတွေက တစ်တွီတွီမြည်ပါပြီ..။ ကိုယ်ကနိုးပြီပေါ့..။ အ၀တ်ရှာတာ..၊ သွားကာနီးမှ မီးပူတိုက်ကြတာတွေနဲ့ မနက်လင်းကာစ တစ်နာရီခွဲလောက်က ကိုယ့်အတွက် ငရဲခန်းပါပဲ..။ သူတို့ပြင်နေတုံး ကိုယ်ကမထနိုင်ပေမယ့် အကုန်ကြားနေရတာပေါ့..။ သူတို့သွားကြပြီဆိုမှ တစ်နာရီလောက်ဆက်အိပ်ရတယ်..။ အဲဒါမှ ခေါင်းကိုက်ကလည်း နည်းနည်းပြန်သက်သာတယ်..။
ညတိုင်း သူအိပ်ချင်တိုင်း မီးမှိတ်မှိတ်သွားတာ..၊ အချိန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မဟုတ်ဘဲ မီးမှိတ်မှိတ်သွားတော့ အိမ်သူကြီးကိုပြောခိုင်းပေမယ့် ကိုယ်ဘာသာရှင်းလို့ပဲ ပြန်ပြောခံရပါတယ်..။ ဒါနဲ့ ၁၀နာရီမှာမှ မီးမှိတ်မယ်လေ..။ ၁၀နာရီမတိုင်ခင် အိပ်ချင်သူရှိရင် မီးဖွင့်ရက်အိပ်ပေါ့..။ ၁၀နာရီမှ မီးပိတ်မယ်လေလို့ညှိတော့ မလှုပ်ပါဘူး..။ သောကြာလို့ စနေလိုမှာဆို သူအိပ်တဲ့ ၁၁..၊ ၁၂ မှ မီးပိတ်ပါတယ်..။ မီးခလုတ်ကို အပိုင်စီးထားတာပါ..။ ခလုတ်ကလည်း သူ့ဘက်မှာရှိတာလေ..။ သူ့မှာက မျှတတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူး..။ သူက ဟိုဘက် ၄ ယောက်ခန်းမှာလည်း အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ရန်ဖြစ်ဖူးသတဲ့..။ ကိုယ်က အော်ကြီးဟစ်ကျယ် ပြောရမှာ ရှက်တယ်..။ ကိုယ်က အသက်ကြီးပြီ..။ အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ပြောရမယ့် လူလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့ သတ်မှတ်ထားတယ်..။ ကိုယ့်အရင်ရောက်နေတဲ့သူတွေကို အဲလိုပဲလို့ သူကအဲလိုလုပ်နေတယ်..။ ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိဘူးလို့ အကြံဥာဏ်တောင်းကြည့်တော့လည်း မလှုပ်ကြဘူး..။ ပြဿနာမဖြစ်ရင်ပြီးရော ကိုယ်သက်သာသလိုနေကြတယ်..။
ကိုယ်ကအဲလိုညှိတော့ မီးခလုတ်အပိုင်စီးထားတဲ့တစ်ယောက်က အစ်မတံခါးဖွင့်တာ ကြမ်းတယ်တဲ့..။ ကိုယ်က တံခါးကို အသာကြိတ်လှည့်ဖွင့်တာပါ..။ လွှတ်ချပြီးလည်း မပိတ်ဘူး..။ သေချာဖွဖွ စေ့ပိတ်ပေးတာပေမယ့် တံခါးက ကိုယ်ကအထာမကျလို့လားပဲ အသံကတော့ နည်းနည်းထွက်တယ်..။ သူပိတ်ရင် အသံမထွက်ဘူး..။ ကိုယ်ကြိုးစားလုပ်ပေမယ့် တံခါးက ကိုယ်ပိတ်ရင် သော့ကိုကြိတ်လှည့်တဲ့အသံတော့ ထွက်တယ်..။ သူကလည်း ဆတ်ဆတ်ထိမခံနေမယ်..။ မရ ရတာနဲ့ အပြစ်လှည့်တင်တာပေါ့..။ ကိုယ်ကအပြစ်လှည့်တင်တာမဟုတ်ဘူး..။ ပြေလည်အောင်လုပ်တာ..။ တံခါးက အစ်မသေချာအသံမမြည်အောင်ပိတ်တယ်..။ ဒါပေမယ့် အသံထွက်တာတော့ တမင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး သူနဲ့စကားဆက်ပြောချင်စိတ်ကုန်သွားလို့ မပြောတော့ဘူး..။ သူက သူအနိုင်ရချင်တာ..။ ပြေလည်ချင်စိတ်ရှိတာ မဟုတ်ဘူး..။ သူ့ဓာတ်ပုံလေးပြတုံးက ကြည့်ဖူးလိုက်တယ်..။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ နှစ် စရောက်ကာစက သူ့မျက်နှာက နုနုလေးတဲ့..။ အခု တော်တော်ရင့်သွားပြီတဲ့..။ ဟုတ်တာပဲ..။ ဟိုးအရင်ကလို နုနုဖတ်ဖတ်လေး မဟုတ်တော့ဘူး..။ သူ့ဒေါသကြောင့်ဖြစ်မှာပဲ..။ ဟိုဘက် ၄ ယောက်ခန်းမှာလည်း နေလို့သာနေနေတာ..။ ဘယ်သူနဲ့မှ စကားမပြောဘူး..။ အကုန်လုံးနဲ့ လှည့်စကားများထားတယ်တဲ့..။
အဲဒီတစ်ယောက်နဲ့နှစ်လလောက်နေလိုက်ရတယ်..။ သူလည်း တစ်နေရာပြောင်းသွားတော့တယ်..။ သူ့နေရာကို အလုပ်လာရှာတဲ့တစ်ယောက်က နေရာယူလိုက်တယ်..။ သူရွှေ့သွားတော့ ကိုယ်က လမ်းကြုံတာနဲ့ အထုပ်တွေသယ်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်..။ ကိုယ့်မှာ သေးငယ်တဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဆိုတာ ပြလိုက်တာပါ..။
အလုပ်လာတဲ့တစ်ယောက်က အလုပ်လွယ်လွယ်ကူကူရသွားပါတယ်..။ သူက ကိုယ်နဲ့အသက်အတော်ငယ်ပေမယ့် ဘယ်သူ့ကိုမှ တလေးတစားရှိပုံမရပါဘူး..။ ကိုယ်က စားပွဲသုံးနော်လို့ပြောထားတာဆိုတော့ သူ့လက်တော့ပ်က ကိုယ့်စားပွဲပေါ်က မဖယ်တော့ပါဘူး..။ ကိုယ်စာကြည့်တော့မယ်မှန်းသိလည်း ဖယ်ပေးရကောင်းမှန်းမသိပါဘူး..။ ဒါနဲ့ပဲ နောက်တော့ ကိုယ့်စာအုပ်တွေအကုန်တင်ထားခဲ့ပြီး သူ့ကိုမသုံးနဲ့တော့ဆိုတဲ့ အရိပ်အကဲပြလိုက်ပါတော့တယ်..။ ဒါပေမယ့် အလုပ်ကပြန်လာပြီးလည်း ကျန်တာတွေမလုပ်နိုင်သေးဘဲ ရုရှားနဲ့ ချက်ရ..၊ ဂျီတော့ပြောရပြန်ပါတယ်..။ သူဂျီတော့ပြောရင်း အညောင်းဆန့်တာ ဒီဘက်ကုတင်မှာတင်ထားတဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းကိုတိုက်မိပြီး ဖုန်းကျပြီး ပါဝါကိုပိတ်သွားပါတယ်..။ ကိုယ်လည်း တော်တော်စိတ်ဆိုးပါတယ်..။ ကျောင်းတက်တဲ့သူ..၊ ပိုက်ဆံကိုအိမ်ကမှာသုံးရသူဆိုတော့ အပိုနှစ်ခုသုံးခု မသုံးနိင်ပါဘူး..။ပြန်တောင်းပန်ရမှန်းလည်း မသိပါဘူး..။ လျော်ရမှာစိုးလို့ မသိသလိုပဲနေပါတယ်..။
အလုပ်ရသွားတဲ့ တစ်ယောက်က ပိုဆိုးတာက ရုရှားနဲ့ ဂျီတော့ပြောလွန်းတာပါ..။ သူက တိုးတိုးပြောတာပါလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ဂျီတော့နဲ့တိုးတိုးဆိုတာ ဘယ်လောက်တိုးနိုင်မှာလဲ..။ တစ်နာရီလည်း မပြီး..၊ နှစ်နာရီလည်း မပြီးပါ..။ ကိုယ့်အကြောင်းအကျိူးပဲလို့ အခုမှပြန်မြင်နိုင်ပါတယ်..။ သူကလည်း သူ့ဂျီတော့အသံထွက်တာကို ကိုယ်မကြည်မှန်းသိတော့ ညဆိုမီးစောစောပိတ်ပါတော့တယ်..။ မနက်ဆိုလည်း ကိုယ့်မျက်နှာတည့်တည့်ပေါ်ကမီးကို ကိုယ်တမင် မနိုးနိုးအောင် ဖွင့်ပါသေးတယ်..။ ကိုယ့်အကုသိုလ်တွေလည်း ဒီဘ၀ဒီမျှ ကုန်ပါစေတော့လို့ ဆုတောင်းချင်ပါတယ်..။
ကိုယ်ကညနက်အောင် စာကြည့်ရသူ..။ နောက်ပြောင်းလာတဲ့ အလယ်ကုတင်ကတစ်ယောက်ကလည်း သွားကာနီးမှ မီးပူတိုက်တတ်သူ..။ ကိုယ်ဟာ အေးအေးဆေးဆေး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် စာကြည့်ခွင့်..၊ အိပ်ခွင့်ပါမလာသူပဲနေမလား..။ ခြောက်လ အဲဒီအခန်းမှာ ၀ဋ်ခံခဲ့ရတယ်..။ အဲဒါပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့သည်းခံနိုင်တဲ့စိတ်လေးက တစ်ဆစ်လောက်ပြန်ဝင်သွားတယ်လို့ ယူဆနိုင်ကောင်းတယ်..။ အဲဒီအခန်းမှာ လူတွေအားလုံးက သာမာန်လခစားတွေချည်းပဲ..။ ဘယ်သူမှထူးထူးချွန်ချွန်များနေတဲ့သူ မပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် ဘွဲ့ရတွေချည်းပဲလို့ပြောရမယ်နော်..။
အခုလည်း တစ်ယောက်တည်းနေလာတာ တစ်နှစ်ကျော်အကြာမှာ နှစ်ယောက်နေဖို့ အကြောင်းဖန်လာပြန်တယ်..။ နှစ်ယောက်နေတော့ ကိုယ်နဲ့အခန်းဖော်က သန့်ရှင်းရေးအလုပ်သမား..၊ ပြည်ကြီးတရုတ်မ..။ ညကို အခန်းပြင်ထွက် လက်တော့သုံးဖို့ Request လုပ်တယ်..။ ရပါတယ်ပေါ့..။ မနက်ခင်းမှာ မီးမဖွင့်ဖို့ အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုပြောခိုင်းတော့ အိမ်ပိုင်ရှင်က ပြောမပြော သေချာမသိရဘူး..။ ဒါပေမယ့် မနက်ခင်းမှာ အေးအေးဆေးဆေးပဲ..။ မီးလည်းမဖွင့်ဘူး..။ အသံကြားတာနဲ့နိုးတတ်တဲ့ကိုယ်ကလည်း သူထတာနဲ့ နိုးပါတယ်..။ ဒါပေမယ့်ဘာမှ ဆူဆူညံညံသံမထွက်ဘူး..။ အ၀တ်ဗီရိုက ဆီနည်းလို့မြည်တဲ့အသံ..၊ တံခါးကြိတ်ဖွင့်သံတွေပဲကြားရတယ်..။ ဖျတ်ဖျတ်ဆို ခဏနဲ့ငြိမ်သွားတာပါပဲ..။
ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဘွဲ့ရတွေရဲ့အသိက အလုပ်သွားရမှာမို့ စောစောမီးမှိတ်ချင်တယ်ဆို အိပ်တာနောက်ကျလို့ မထနိုင်သေးသူအတွက် မီးမထွန်းသင့်ဘူး..၊ မီးပူမတိုက်သင့်ဘူးဆိုတာ သူတို့အကဲမခတ်နိုင်ဘူးလား..။ မကြိုက်လည်း ငါအဆင်ပြေရင်ပြီးရော..၊ ငါလုပ်ချင်လုပ်မှာပဲဆိုတဲ့ ငါတကော ကော နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လိုအဆင်ပြေကြတော့မလဲ..။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာရေးနဲ့ဆိုင်မလား..၊ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်..နဲ့ဆိုင်မလား..။ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးမကောင်းလို့ လူတွေရိုင်းကုန်တာလို့ အပြစ်ပုံချရမလား..။ လောကနီတိမသင်ပေးလိုက်လို့ပဲ အပြစ်တင်ရမလား..။ မြန်မာတွေများရင် အဆင်မပြေကြတော့ဘူး..။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို ဖြေရှင်းကြမလဲ..။ လောကနီတိမသင်ရင် ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလို့ ကျွန်တော်တော့မြင်မိတယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 7/05/2013 03:23:00 pm0comments
သမီး ထီမည်မဟုတ် ...
တစ်ဘဝတွင် တစ်ခါသာ သေရသည်ဖြစ်၍
သမီး၌ မထူးခြား ...
မိခင်ထံမှ ဒါမှ ငါ့သမီးဟူသော
အသိတတ်ဆုံးသမီး ဖြစ်ရပါလို ...။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 6/26/2013 08:21:00 pm0comments
-တစ်လောက ဂျူနီယာတစ်ယောက်တွေ့မိတယ်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေ ပြောတော့ ကိုယ်က နားထောင်သူပေါ့။ သူက ဟိုစာအုပ်၊ ဒီစာအုပ် ဖတ်ပြီးပြီလား။ ဒီဟာသိပြီးပြီလား စသဖြင့်ပြောတယ်။
-အဲ့ဒါနဲ့ပြန်မေးဖြစ်တယ်။ ညီက ဘာကိုလိုချင်တာလဲ။ စာအုပ်ထဲက အနှစ်သာရကိုသိချင်တာလား။ ဒါမှမဟုတ် နိုင်ငံရေးအယူအဆတစ်ခု နဲ့ပတ်သက်တာကို စံနစ်တကျ လေ့လာချင်တာလား လို့မေးမိတယ်။ သူငြိမ်ပြီးနားထောင်နေတယ်။
-ဒါနဲ့ဆရာဖေမြင့်စကားကိုပြန်ပြောပြမိတယ်။ စာအုပ်ဆိုတာ စာရေးသူတစ်ယောက်က သူ့ကိုယ်ပိုင်သုံးသပ်ချက်တွေနဲ့ရေးထားတာရှိတယ်။ နာမည်ကြီးချင်လဲကြီးမယ်။ ကောင်းချင်လဲကောင်းမယ်။ နာမည်မကြီးဘဲကောင်းနေတာတွေလဲရှိတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်သူပြောတာအားလုံးအမှန်လို့ယူဆပြီး ဒီအထဲကဟာတွေကို ကိုးကွယ်နေလို့မရဘူးဆိုတာကို ပြန်ရှင်းပြရတယ်။ ဘယ်လောက်ဖတ်သလဲဆိုတာထက် အဲ့ဒီစာကို ဘယ်လိုဖတ်ပြီး ဘာတွေ ဘယ်လောက်နားလည်တတ်ကျွမ်းသွားသလဲဆိုတာက ပိုအရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။
-နောက် အယူအဆတစ်ခုမှာ Hypothesis လို့ခေါ်တဲ့ အဏုမာန မှန်းဆခြင်းဆိုတာရှိတယ်။ အဏုမာနမှန်းဆခြင်းဆိုတဲ့အဆင့်ဟာ Scientific Testing လို့ခေါ်တဲ့ အဆင့်ဆင့် ဖြတ်ကျော်သုတေသန လုပ်မထားရသေးတဲ့ ဟာတွေဖြစ်တယ်။ ဒီလို သုတေသနလုပ်မထားရသေးတဲ့ အယူအဆတွေကို နိုင်ငံရေးဂျာနယ်တွေ၊ ဆောင်းပါးတွေမှာတွေ့ရတတ်တယ်။ ဒီလိုဟာတွေကိုအကုန်မှန်မယ်လို့ယူဆလို့မရဘူး။ သူတို့တည်ဆောက်တဲ့ အဆို(Arguments) တွေအားကောင်းရင် ကိုယ်က ယုံမိတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဒါဟာ Strong Arguments အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ်။ သက်သေပြပြီးသား(Evidence Based) တွေမဟုတ်သေးပါဘူး။
-ဒါကြောင့် အယူအဆ တစ်ခုကိုတွေ့တယ်ဆိုရင် ဒီအယူအဆအပေါ် ဘယ်လို အနုစိတ်သုံးသပ်ထားသလဲဆိုတဲ့ ကျယ်ပြန့်တဲ့အမြင်ကိုလိုချင်ရင် ဒါတွေကိုပြန်ပြီး သုတေသနလုပ်ထားတဲ့ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဂျာနယ် ဆိုတာတွေကိုဖတ်ရပါတယ်။ ဂျာနယ်ဆိုတာ မြန်မာပြည်ကဂျာနယ်မဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာမှာ ဂျာနယ်ဆိုတာ ပညာရပ်စာတမ်းတွေ ဖော်ပြတဲ့စာစောင်တွေကိုပြောတာပါ။ သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ထိပ်သီးတွေက တည်းဖြတ်ပြုစုတဲ့စာတမ်းတွေကိုပြောပါတယ်။ ဒီလို စာတမ်းတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးကြည့်ပြီး အယူအဆ သီအိုရီတစ်ခု အားကောင်းခြင်းရှိမရှိ၊ အသစ်တွေ့ရှိချက်များ ကျန်မကျန် ကိုစစ်ဆေးရပါတယ်လို့။
-ဒါကြောင့်ပါ။ ဒီလို ပညာရပ်ဂျာနယ်တွေကို ဆန်းစစ်လေ့လာထားတာတောင်မှပဲ တစ်ကယ့်လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရင်အများကြီး ပြဿနာတက်တာတွေရှိနေတတ်ပါသေးတယ်။ အထူးသဖြင့် ပြည်သူနဲ့ဆိုင်သော မူဝါဒများ (Public Policy) တွေကို ဘယ်ဟာချမှတ်သင့်သလဲ ဆိုတာကို ဆန်းစစ်ဝေဖန်ထားတဲ့ သုတေသနစာတမ်းတွေဆိုရင်တောင်မှပညာရှင်အသီးသီးက ရှုဒေါင့်စုံကနေ ဆန်းစစ်ပြထားတဲ့အမြင်တွေကိုလေ့လာပြီးမှ ပေါ်လစီချမှတ်သူက ဆုံးဖြတ်ချက်ချရတာမျိုးပေ့ါ။
-ဒါလေးတွေက ဗဟုသုတပြောပြဖူးတာလေးပေါ့ဗျာ။ သင့်သလိုသုံးနိုင်ကြပါတယ်။ Credit to Myo Set
Posted by ကြည်မြန်မာ at 6/25/2013 01:49:00 pm0comments
ဘ၀မှ ရရှိသော သင်ခန်းစာ-
၁.နှိမ့်ချ ပြက်ရယ်ပြုခြင်းကို အမြဲတစေခံရသော ကလေးသည် တွန့်ဆုတ် ကြောက်ရွံ့လေ့ရှိ၏။
၂.ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်း အမြဲတစေခံရသောကလေးသည် သူတစ်ပါးကို အပြစ်ရှာလေ့ရှိ၏။
၃.အမုန်းနှင့်ထိတွေ့သောကလေးသည် သူတစ်ပါးကို ရန်မူနေလေ့ရှိ၏။
၄.မေတ္တာဖြင့်ထွေးပိုက်ခြင်း မခံရသော ကလေးသည် သူတစ်ပါးကို ရန်မူလေ့ရှိ၏။
၅.ထောက်ခံအားပေးမှုခံရသောကလေးသည် မိမိ၏စွမ်းရည်ကို အားထားယုံကြည်လေ့ရှိ၏။
၆.ချီးမြှင့်မြှောက်စားခြင်းခံရသောကလေးသည် သူတစ်ပါးကျင့်ကြံဆောင်ရွက်မှုကို တန်ဘိုးထားလေ့ရှိ၏။
၇.အေးအတူ ပူအမျှ စိတ်ထားရှိသူနှင့် နေရသောကလေးသည် သူတစ်ပါးအပေါ် စာနာလေ့ရှိ၏။
၈.သည်းခံတတ်သူနှင့် ထိတွေ့နေရသော ကလေးသည် သူတစ်ပါးကို ခွင့်လွတ်လေ့ရှိ၏။
၉.ဗဟုသုတရှာမှီးသူများနှင့် နေရသောကလေးသည် ပညာ၏တန်ဘိုးကို သိရှိလာတတ်၏။
၁၀.ပျော်ရွှင်သော ပေါင်းသင်းစုနှင့်နေရသောကလေးသည် မေတ္တာနှင့် လှပခြင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိတတ်၏။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 6/23/2013 10:36:00 pm0comments
မစံပယ်တို့ဒေသမှာ သင်္ဘောသီးသုပ်က ဆောင်းတွင်းမှာပဲရောင်းကြသည်ထင်သည်..။ အချိန်ပြည့်မရပါ..။ သင်္ဘောသီးသုပ်ဝါ၀ါထိန်ထိန်လေး စားရလျှင် မစံပယ်မှာ ကြိုက်လှသည်..။ (ဟမ်..မကြိုက်တာဘာရှိလို့လဲ..။ ရှိပါဘူး..။:D) တစ်ခါကလည်း ဖေ့စ်ဘုတ်ထဲကအစ်ကိုတစ်ယောက်က သူ့ဒေသက သင်္ဘောသီးသုပ်ပုံတင်ကာ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကို ကလိသည်..။ ထိသွားသည်ကတော့ မစံပယ်တည်း..။ သင်္ဘောသီးသုပ်စားချင်သည်..။ သင်္ဘောသီးအစိမ်းသည်ရှာသည်..။ သြော်..တွေ့ပြီ..။ မစံပယ်ဝယ်နေကျဆိုင်မှာ နေ့တိုင်းရသည်ပဲ..။ ဈေးလည်းသက်သာသည်..။ အိုကေ..။ သင်္ဘောသီးအတွက် အဆင်ပြေပြီ..။
သင်္ဘောသီးနန်းဆွဲဖို့ နန်းပြားဝယ်ရဦးမည်..။ ဆိုင်တွေမှာတွေ့သည်..။ ဈေးက မသက်သာလှ..။ ဒါနဲ့ တကူးတကကို တစ်ခြားအရပ်ကိုသွားပြီး နန်းဝယ်လိုက်သည်..။ အိုကေပြီ..။
ကြက်သွန်ဖြူလေးဆီသတ်ပြီး ဆီဝါချက်သည်..။ ဟမ်း..မွှေးလှသည်..။
ပဲမှုံ့က လက်ဆောင်ရတာ အစိမ်းမှုံ့ပဲရှိသည်..။ ကိစ္စမရှိ..။ အိုးပူပေးကာ ပဲမှုံ့စိမ်းကိုလှော်လိုက်သည်..။ ပဲမှုံ့အကျက်ဖြစ်သွားပြီ..။ လူကြံဘာခံနိုင်မလဲလေ..။
သင်္ဘောသီးကို အခွံနွှာရသည်..။ ထက်ခြမ်းခွဲကာ အစေ့ထုတ်ရသည်..။ နန်းဆွဲရသည်..။ အစားအတွက်ဆို အပင်ပန်းခံသည်..။ နန်းဆွဲပြီးသားသင်္ဘောဖတ်လေးများကို နှယ်ရလွယ်မည့်ဇလုံကြီးကြီးထဲထည့်ကာ ပဲမှုံ့..၊ ဆီကျက်..၊ ငါးငံပြာရည်..၊ ဆား..၊ မန်းကျည်းသီးမှည့်ရေ..(ရေဆေးပြီး ရေနွေးစိမ်ထားသည်..။ အနှစ်ရလွယ်အောင်..။)..။ ပုစွန်ခြောက်မှုံ့လေးထောင်းကာထည့်သည်...။ ပိုပြီးချိုမြိန်အရသာရှိစေသည်..။ အားရပါးရနှယ်ရသည်..။ လက်ညောင်းအောင်နှယ်ရတတ်သည်..။ အပေါ့အငံမြည်းပြီး ပဲမှုံ့များများထည့်ရသည်..။
အိုး... မွှေးလှ၊ကြိုင်လှ၊စပ်လှသော အညာသင်္ဘောသီးသုပ်လေး စားရပြီ..။ အိမ်အလွမ်းပြေသည်..။ ကောင်းလေစွ..။
မှတ်ချက်။ ။ ပဲမှုံ့ပြတ်လပ်သွားလျှင် အာလူးကိုပျော့အောင်ပြုတ်ပြီး အအေးခံကာ သင်္ဘောသီးနှင့်ရောနှယ်လည်းရသည်..။ ပဲမှုံ့ပြတ်သွား၍ မစံပယ်ဒီနည်းကို အားကိုးနေရသည်..။ (ဤကားစကားချပ်..။) ဓာတ်ပုံနောက်မှတင်မည်..။ စာရေးချင်၍ ကောက်ရေးထားလိုက်သည်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 6/05/2013 04:59:00 am2comments
ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားသည် ယနေ့အချိန်ထိ သက်ရောက်မှုရှိနေသည့် ဓမ္မ (တရား)နည်းလမ်းကျသော အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုများအား အောက်ပါ အတိုင်း အချက်ကြီး ၁၀ ချက်ဖြင့် ဟောကြားခဲ့လေသည်.....
(၁) ပညာရှိသည် မဆန့်ကျင် မထောင်လွှားပဲ ဆွေးနွေးသင့်၏
(၂) မပြန့်လွင့်သည့် စိတ်နှင့် ဆွေးနွေးသင့်၏
(၃) ဂုဏ်မပြိုင် နိုင်ထက်စီးနင်း မပြုပဲ ဆွေးနွေးသင့်၏
(၄) ငြူစူခြင်းမရှိပဲ ဆွေးနွေးသင့်၏
(၅) ကောင်းစွာသိ၍သာ ဆွေးနွေးသင့်၏
(၆) သူတစ်ပါးကို ချုပ်ချယ် စောင်းမြောင်းခြင်း မပြုသင့်
(၇) ချွတ်ချော်သော စကားကိုလည်း အပြစ်ဟု မယူသင့်
(၈) ပါဠိ ပါဋ္ဌ်သားများအား ရွတ်ဆို၍လည်း မလွှမ်းမိုးသင့်
(၉) အကြောင်းပြပြီး ဖိနှိပ်ခြင်းလည်း မပြုသင့်
(၁၀) အမှန်၊ အမှား ရောထွေးသော စကားကို မပြောသင့်ဟု အင်္ဂုတ္ထိုရ် တိကနိပါတ်၊ ကထာဝတ္ထု သုတ်တွင် ဟောကြားခဲ့ပေသည်.....။
အဆိုပါ ဟောကြားချက်များသည် ယနေ့အချိန်အခါတွင် မည်သည့်ဆွေးနွေးမှုမျိုးတွင်မဆို ကျင့်သုံးနိုင်ပါက လွန်စွာပင် ကောင်းမွန်ပေသည်..... အမှတ်စဉ် (၈) နေရာတွင် ဘာသာရေး ဆွေးနွေးခြင်းအစား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရာတွင် စကားလုံးကြီးများနှင့် ဖိနှိပ်မှုဟုယူသော် ရပေလိမ့်မည်......။ Credit to James Mint
၁။ ပြဿနာကို မေးလိုက်တဲ့အခါ တိုက်ရိုက်ဖြေဆိုသင့်ပါလျက်နဲ့ တိုက်ရိုက်မဖြေသူ
၂။ ဝေဖန်ပြီး ဖြေဆိုရမယ့် ပြဿနာကိုလည်း ဝေဖန်ပြီး မဖြေသူ
၃။ ပြန်မေးပြီး ဖြေရမယ့် ပြဿနာမျိုးကိုလည်း ပြန်မေးပြီး မဖြေသူ
၄။ ပြဿနာကို မေးမြန်းတဲ့အခါ အကြောင်း ဟုတ်သည် ၊ မဟုတ်သည်ကိုလည်း မကြည့်
၅။ ကြံဆအပ်သော အရာကိုလည်း မကြံဆ
၆။ သိရမည့် ၀ါဒကိုလည်း မပြနိုင်
၇။ ဖြေဆိုသူတို့ ၏ ကျင့်ဝတ်နှင့်လည်း မတည်
၈။ပြဿနာကို မေးမြန်တဲ့အခါ စကားကြောင်းလွဲပြီး ဖုံကွယ်သူ
၉။မေးတဲ့ ပြဿနာနဲ့ မဆိုင်တဲ့ အပြင်စကားများကိုပြုပြီး ပြဿနာကို ပယ်သူ
၁၀။ စိတ်ဆိုးအမျက်ထွက်ပြီး မနှစ်သက်မှုကို ထင်ရှားအောင်ပြုသူ
၁၁။ ပြဿနာမေးမြန်းတဲ့အခါ ပါဠိပါဋ္ဌ်သားများကို တသီကြီးရွတ်ပြီး တဖက်သားကို လွှမ်းမိုးဖို့ ကြိုးစားသူ
၁၂။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖိနှိပ်တတ်သူ
၁၃။ တတ်ယောင်ကား ပုံစံဖြင့် မေးသူအား သံသယပွားလာအောင် ဟားတိုက်သူ
မစံပယ်ကတော့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုပြင်းထန်ကာ မိမိအသက်အရွယ်၊ ပညာကိုမထောက်..၊ သူတစ်ပါး၏ကိုယ်ကျင့်တရားကိုမငဲ့ကွက်..၊ ကလေးဆန်လှသော အပြုအမူရှိသူများနှင့် အပြိုင်ငြင်းရမှာ စိတ်ပျက်လှပါသည်..။ တစ်ဘက်လူဘာပြောချင်သည်ကို အလေးမထား..၊ တစ်ဘက်လူ၏အခြေအနေ..၊ သဘောသဘာဝ..၊ ဖြေရှင်းချက်ကိုလက်သင့်ခံကြားနားခြင်းမရှိ..။ မိမိပြောသည်သာအမှန်..၊ အသင့်တော်ဆုံးဟုထင်သည့် ကလေးကလားဆန်သူများနှင့် စကားတုဖက်ပြိုင်ပြောရမည်ကို စိတ်ပျက်လှသော်လည်း လူမှုအသိုင်းအ၀န်းတွင်နေနေရသည်ဖြစ်ရာ ရှောင်လွှဲမရ ကြုံလာလျှင်လည်း ပြန်တုံ့ပြန်ရန် စဉ်းစားထားရပါသည်..။
စကားပြောရာတွင် မစံပယ်ထည့်စဉ်းစားသည်မှာ စကား၏ဆိုလိုရင်းသည် ဘာလဲ..။ သူနားလည်အောင် ဘယ်လိုပြောမလဲ..။ ဘယ်နည်းနှင့်ပြောလျှင် သူခံသာမလဲ..၊ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာမထိခိုက်စေရန် မည်သို့ပြောမည်လဲ..စသောအချက်များကို စဉ်းစားပါသည်..။ စကားသည် လူတစ်ယောက်၏ စိတ်နေစိတ်ထား..၊ အဆင့်အတန်းကို ကိုယ်စားပြုဖော်ပြသည်ဟု မှတ်ယူပါသည်..။ မိမိ၏အပြောအဆို အပြုအမူကြောင့် သူတစ်ပါးဂုဏ်သိက္ခာထိပါးမည်ကိုလည်း အလေးထားထားမိရ၏..။
အချို့လူများ၏ ကိုယ်မှန်လျှင်ပြီးရော..၊ ကျန်တာ ဘာမှဂရုမစိုက်ဟူသောသဘောများကို အံ့သြမိသည်..။ ကိုယ်မှန်လျှင် မည်သူနှင့်ချဲရချဲရ..၊ စကားများရများရ.. ကိစ္စမရှိဟု အမှန်နှင့်အနိုင်ကို တွဲလိုက်တတ်သူများ၏ ကလေးဆန်မှု..၊ မပြည့်ဝမှုသဘောတရားများကို မျက်ဝါးထင်ထင် ကြုံခဲ့ရာမှ ပြည့်ဝသူများ၏ တုံ့ပြန်ပုံများကို ရှာဖွေမှတ်သား အတုယူရသည်..။
စိတ်သဘောထားပြည့်ဝသူများသည် မငြင်းခုံတတ်..၊ ငါ့စကားနွားရ ကိုယ်မှန်လျှင်ပြီးရော ရောမချတတ်..။ ရန်မလိုတတ်..။ ထိုသူမျိူးဖြစ်အောင် မစံပယ် ကြိုးစားရပါဦးမည်..။ ထိုသဘောရှိသောသူများနှင့် ကွေကွင်းခဲ့ရသည့်အတွက်လည်း မစံပယ်မှာ ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ၀မ်းသာအားရ.. ကျေနပ်လက်ခံမိနေပါတော့သည်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 5/31/2013 03:08:00 am 1 comments
မေး။ ။ ကျွန်တော် အသက်(၁၆)နှစ်ရှိပါပြီ..။ အနာဂတ်မှာ Programming Field ထဲမှာ အလုပ်လုပ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားပါတယ်..။ နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်ကိုကျောင်းလျှောက်လိုက်ပြီးကတည်းက Programming ကို အတွေ့အကြုံရဖို့ စလေ့လာထားချင်ပါတယ်..။ ပညာရေးအတွက်ရော..၊ နောင်အလုပ်အတွက်ရော အဆင်ပြေချင်လို့ပါ..။ မနှစ်ကတော့ Java သင်ခဲ့ပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်တစ်အုပ်ပြီးတာနဲ့ စိတ်ပျက်လာပြီး သူ့ကိုမစွန့်လွှတ်ခင်တော့ Project တစ်ခု ပြီးခဲ့ပါသေးတယ်..။
ဒီနှစ်တော့ C# သင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ..။ Java အခြေခံနည်းနည်းရှိထားတော့ တစ်ချို့အချက်တွေ ပြန်အမှတ်ရပါတယ်..။ အရင်အတွေ့အကြုံရှိမထားတော့ ပြန်တော့ဖတ်ရပါတယ်..။ ကျွန်တော့်အထင် အဲဒီနှစ်ခုက တူသင့်သလောက်တူပြီး မတူသင့်သလောက်လည်း ကွဲတယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။
ကျွန်တော်C# စလေ့လာတာကတော့ Herb Schildt's ရဲ့ "C# 3.0 A Beginner's Guide" ဆိုတဲ့ စာအုပ်ပါ..။ ပြီးအောင်လေ့လာပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်ပြီးတော့ အခုဘာဆက်လုပ်ရမလဲ မသိပါဘူး..။ တွေ့ရာပရောဂျက်တစ်ခု ကောက်ရေးနေပါတယ်..။ (တကယ်လုပ်နိုင်တာထက် အများကြီးပိုနေတယ်ဆိုတာ တွေ့ပါတယ်..။) ပိုအဆင့်မြင့်တဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေကို ဖတ်ရမလား..။(လက်တွေ့အတွေ့အကြုံက မရှိပါဘူး..။)ဒီစာအုပ်ဖတ်ပြီးပေမယ့် တကယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ Programmer ဖြစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ မသိသေးပါဘူး..။
အဖြေ ၁။ ။ သေးသေးလေးက စလုပ်ပါ..။ တကယ့်သေးသေးလေးကို ရေးပါ..။ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး ပြီးအောင် ပြည့်စုံသွားအောင် ရေးပါ..။
ပထမProgram ပြီးတာနဲ့ နည်းနည်းပိုရှုပ်ထွေးတဲ့ ဒုတိယတစ်ပုဒ်ရေးပါ..။ ဒါပေမယ့် သေးသေးလေးက စရေးပါ..။ ဥပမာ။ ။ unit ပြောင်းတဲ့ Text Based Application လိုမျိူးကို စရေးပါ..။
အဲဒါကိုပဲ လအနည်းငယ်ကြာအောင်ရေးပါ..။ ဘယ် Program တစ်ခုထဲပေါ်မှာပဲ အာရုံမစိုက်ပါနဲ့..။ ပြီးခဲ့တဲ့အဟောင်းတစ်ခုကိုပဲ နည်းနည်းစီ ထပ်ထည့်ပြီး ပြီးသွားအောင် ပြည့်စုံသွားအောင် ကြိုးစားပါ..။ အမှားလုပ်မိမှာနဲ့ Code တွေ မကောင်းတာ ညံ့တာဆိုတာ မပူပါနဲ့..။
ဘာလဲဆိုတော့ အကြိမ်တိုင်း တကယ်ပြီးအောင်လုပ်ဖို့က လိုရင်းပါပဲ..။ ဒါမှ တွန်းအားဖြစ်လာမယ်..။ ဒါပေမယ့် စိတ်ဝင်စားစေမယ့် element အသစ်တွေရှိပါတယ်..။ အတင်းစိတ်အားထက်သန်လွန်းလို့လည်း မရပါဘူး..။ အစောပိုင်းပရောဂျက်တွေမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေလုပ်တာက နောက်တစ်ခါ မလုပ်မိစေတော့ဘူးပေါ့..။ Problems ကို မတူညီတဲ့ချဉ်းကပ်မှုနဲ့ ချဉ်းကပ်နိုင်မယ်..။ အမှားတွေလုပ်မိနေပေမယ့် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ Problem တွေက ဓားသွေးကျောက်တွေ ဖြစ်လာတာပါပဲ..။ Problem ကို သေးငယ်အောင်လုပ်လိုက်တာနဲ့အမျှ ပြဿနာအသစ်တွေကို အောင်မြင်နိုင်လုပ်နိုင်ပြီး Design Decision နဲ့ပတ်သက်လို့ စိတ်ပျက်ပြီး လက်လျှော့ချင်တာမျိူး ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး..။ အကြိမ်တိုင်းပြန်လည်တက်ကြွလာပြီး ပေါ်လာတဲ့အကြံဥာဏ်တွေကလည်း ဂုဏ်ယူစရာCode တွေ ဖြစ်လာစေမှာပါပဲ..။
အဖြေ ၃။ ။Project အတွက် Idea လိုတယ်ဆိုပါတော့..။ ကွန်ပျူတာပြင်ပက မင်းဝါသနာကိုကြည့်လိုက်ပါ..။ မင်းဝါသနာကို ကွန်ပျူတာနဲ့ပြီးနိုင်တဲ့တစ်ခုကို ရွေးလိုက်ပါ..။ ဥပမာ။ ။ မင်းက ဓာတ်ပုံဆရာဆိုပါတော့..။ Photo Album Program လေးရေးပေါ့..။ အဲဒါမင်းအတွက် အသစ်စက်စက်ကြီးဖြစ်မနေဘဲ မင်းစိတ်ဝင်စားတာအပေါ်မှာပဲ ထပ်ချဲ့သွားတာပေါ့..။ Hello World Program ထက်တော့ ကြီးမှာပဲလေ..။ မရေးခင်တော့ မင်း Program က ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ ချရေးထားပါ..။ အစိတ်အပိုင်းသေးသေးလေးတွေခွဲထားပြီး တစ်ခုချင်းစုစည်းရေးသွားပါ..။
အဖြေ ၄။ ။ ငါကတော့ ငါ့အရည်အချင်းကို အွန်လိုင်းမှာတွေ့တဲ့ Code Kata exercises တွေနဲ့မြှင့်ခဲ့တာပဲ..။ 15 Exercises to KnowaProgramming Language ဆိုတာတွေနဲ့ပေါ့..။ ဒါတွေပြီးရင်တော့ လက်တွေ့ကျတဲ့ Applications တွေရေးပေါ့..။ ဘယ်လို Program နေနေ (မင်းကိုပျော်စေရုံ Program လေးနေနေ) ရေးပါ..။
-ရိုးရိုး Crawler, Website ရှာတဲ့ Program (amazon.com က တစ်ချို့Products တွေကို နာရီးခြားတိုင်းရှာတဲ့ Application သေးသေးလေးဖြစ်ဖြစ်)
-Text based game
-Log file parser
-Open source project ရှာပြီး အဲဒီမှာလည်း ၀င်ရေးတာမျိူး
ဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်..၊ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုတည်းကို ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်တာလည်း အထောက်အကူပြုပါတယ်..။ Factor တွေပြန်ခွဲတာ..၊ Pattern တွေ သတ်မှတ်လိုက်နာတာ..၊ Unit Testing တွေ လေ့ကျင့်တာဖြစ်ဖြစ် လုပ်ပါ..။
အဖြေ ၅။ ။ Program ရေးဖို့ရာ Programming (အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း) ဖြင့်ပဲ သင်ရမယ်..။ Computer ကို မင်းလုပ်စေချင်တဲ့ ရိုရိုး Program ကိုရွေးပါ..။ ရေးပါ..။
အဖြေ ၆။ ။ Programming ရေးတာကနေပဲ စပါ..။ စာဖတ်နေရုံနဲ့တော့ ဘယ်မှရောက်မှ မဟုတ်ဘူး..။ ပရောဂျက်သေးသေးလေးကနေစပါ..။ Address book တို့..၊ Calculator တို့လို့ ဘာဖြစ်ဖြစ်..။ စစချင်းပရောဂျက်တွေကတော့ အသုံးဝင်ချင်မှ ၀င်မယ်..။ ဒါတွေကိုပဲ အကြိမ်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာ ပြန်ရေးရရင် ရေးရလိမ့်မယ်..။ ပထမဆုံးရေးတာကို တော်တော်နဲ့ကျေနပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး..။ ဒါပုံမှန်ပါပဲ..။ မင်းမေးတာနဲ့နည်းနည်း လွဲချင်လွဲမယ်..။ တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့ Programmer ဆိုတာ Language တစ်ခုမှာ Master ဖြစ်အောင်ထူးချွန်နေတာထက်ပိုတယ်ဆိုတာ မင်းစဉ်းစားထားသင့်သေးတယ်..။
အဖြေ ၇။ ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာ နောက်တစ်ဆင့်လှမ်းမယ်စဉ်းစားထားရင်တော့ ကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ရမှာပဲ..။ လေ့ကျင့်မှုနဲ့ပဲ ကျွမ်းကျင်မှုကိုရနိုင်မယ်..။ ဘာရေးဖို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ..။ (Web Application? ၊ Desktop Application? ၊ Mobile Application?) ယေဘုယျကျတဲ့ Features တစ်ချို့ကိုရွေးပါ..။ (Authorization တို့ RSS Feeding တို့)..။ Tasks(တာဝန်) တွေ သတ်မှတ်ပါ..။ ထည့်သွင်းအသုံးချပါ..။ နည်းပညာတိုင်းရဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပါ..။ အဲဒီထဲက ကုဒ်တွေရေးပါ..။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ကုဒ်တွေ စစ်ပေးခိုင်းပါ..။ ဒီဖြစ်စဉ်ပဲ ထပ်ခါထပ်ခါလုပ်ပါ..။
အဖြေ ၈။ ။ လူတိုင်းလူတိုင်း တစ်မျိူးစီလုပ်နေကြတာပဲ..။ နည်းပညာအမျိူးမျိူး စမ်းကြည့်လေ..။ ပြီးမှ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာရှာ..။ အဲဒီမှာမှ အင်းအရည်အချင်းပေါ်မူတည်နေမှာပဲ..။ တခါတလေ အချိန်အကြာကြီး လုပ်နေမိပေမယ့် အချိန်ကုန်သွားမှန်းတောင် မသိတာမျိူး ဖြစ်လိမ့်မယ်..။
အဖြေ ၉။ ။ C# in Depth ဆိုတဲ့စာအုပ်က C# သင်ဖို့ ဖတ်သင့်တဲ့စာအုပ်ပဲ..။ C# ကို Confident ရှိသွားပြီးရင် F# တို့ ဘာတို့ သင်ဖို့ကြိုးစားပါ..။
http://programmers.stackexchange.com/questions/98282/what-to-do-after-reading-a-beginners-book-on-c ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုသည်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 5/07/2013 01:54:00 am0comments
Labels: C#, Education, OOP
ဖေ့စ်ဘုတ်ပေါ်မှာ စာလုံးအမှားတွေကနေ တွေးမိတာတွေ..။
အရှိမဲ့ (မှန်) (မဲ့=မရှိ..။)
ငယ်ငယ်တုံးက စလုံးနဲ့ ဆလိမ် အသံထွက်ကွာတာ မသိဘူး..။ ဆားကိုလည်း စား လို့ပဲ အသံထွက်တယ်..။ နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် အဖေ့ရွာကိုပြန်ရတော့ မောင်လေးက အမှားပြင်ပေးတယ်..။ မမ နင်က ဆားကိုလည်း စားလို့အသံထွက်နေတယ်...။ ဆားက ဆား..။ စားက စားဆိုပြီး လျှာကိုသေချာအသံထွက်ပြတယ်..။ သွားစေ့ထားတာကို လျှာဖျားနဲ့ထိုးရင် စား ဆိုတဲ့အသံရတယ်..။ (သွားမစေ့ဘဲ လျှာဖျားနဲ့ထိုးလည်း ရတာပဲနော်..။) ဆားက အသံနည်းနည်းပြင်းတယ်..။ သွားစေ့ထားတာကို လျှာအဖျားနဲ့မထိုးဘူး..။ လေသံပြင်းနဲ့ လျှာဖျားထိပ်နောက်နားလောက်နဲ့ ထိုးရင် ဆား ဆိုတဲ့ အသံပြင်းပြင်းကို ရတယ်....။ အဲဒီတော့မှ စ နဲ့ ဆကို လေသံနဲ့ခွဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားတယ်..။ သူငယ်တန်း တစ်တန်းဆရာမက မသင်တာလား..၊ ကိုယ်ကပဲ မသိတာလား မမှတ်မိတော့ဘူး..။
စာရေးတော့လည်း မျဉ်းမပါရင် မျဉ်းဖြောင့်အောင်မရေးတတ်ဘူး..။ မျဉ်းပါတာတောင်မှ အပေါ်တက်လိုက် အောက်ဆင်းလိုက်နဲ့ လက်ရေးလက်သားက အကောင်းကြီးထဲ မပါဘူး..။ တကယ်က မြန်မာစာလုံးမှာဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလိပ်စာလုံးမှာဖြစ်ဖြစ် အလယ်မှာရှိရမယ့်စာလုံး..၊ အောက်ထိဆွဲရမယ့် စာလုံး..၊ အပေါ်တင်ရမယ့်စာလုံး အစရှိသဖြင့် သူ့ဖလိုးအတိုင်းသွားရင် လက်ရေးက မလှပေမယ့်လည်း အပေါ်တက်လိုက် အောက်ကျလိုက် ဖြစ်စရာမရှိဘူးလို့ ဆရာမကြီးတစ်ယောက်ထောက်ပြမှ အတန်းတော်တော်ကြီးမှကို သိတော့တယ်..။
မြန်မာဆရာ၊ဆရာမကောင်း သိပ်အရေးကြီးတယ်..။(အင်္ဂလိပ်လည်း ဘာထူးလဲနော်...။)
အဆိုးဆုံးတစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ဒေသက လူတွေက နသတ်နဲ့ ငသတ် မခွဲနိုင်ကြတာပဲ...။ နသတ်မှာလည်း ငသတ်သံနဲ့ထွက်တယ်..။ ငသတ်မှာလည်း ငသတ်သံနဲ့ပဲ ထွက်တယ်..။ နသတ်သံထွက်နည်းကို ထောင်တတ်တဲ့နား မရှိကြဘူးလို့ ပြောရမယ်..။ ကျွန်တော့်နာမည်မှာ နသတ်နဲ့ဆုံးတာ တစ်ခုပါတယ်..။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းအရင်းအချာက ငသတ်သံနဲ့ပဲ ခေါ်တယ်..။ သူ့နာမည်မှာ ငသတ်နဲ့ဆုံးတာ တစ်လုံးပါတယ်..။ ကျွန်တော်က သေချာသတိထားပြီး ဂရုစိုက်ပြီးသေချာခေါ်တာမှာ နသတ်သံနဲ့ သွားထွက်တယ်..။ ပါးစပ်ကငသတ်သံထွက်အောင် သေချာရွဲ့ပဲ့ထွက်တာကို နသတ်သံသွားဖြစ်နေတယ်..။ ကျွန်တော်တို့နဲ့ကပ်ရက်ကရွာတွေက အဲဒီလိုမဖြစ်ဘူး..။ ဆရာတစ်ယောက်က ထောက်ပြလို့ သေချာသတိထားခေါ်တယ်..။ မရဘူး..။ ကျွန်တော့်နာမည်ကိုလည်း ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ငသတ်သံနဲ့သေချာအသံထွက်ပြီး ရယ်စရာစ ကြတယ်..။ တစ်ခြားဒေသကလူတွေမှာ တစ်ခြားပြဿနာတွေ ရှိတယ်..။ စသတ်နဲ့ ကသတ်နဲ့မကွဲတဲ့ဒေသလည်း ရှိတယ်..။ သူတို့ကတော့ တစ်နယ်လုံးလို့ပြောရမယ်..။ တော်တော်ဆိုးတယ်..။ ဒေသအများစုကတော့ သနဲ့ တနဲ့ မကွဲကြဘူး..။ သ နေရာမှာ တ တွေနဲ့ပြောကြတယ်...။ ကျွန်တော့်အဖေရွာမှာ အဲလိုတွေ သုံးတယ်..။ တ၀မ်းပူသံကြီး များများကြားရတယ်..။ လျှာဖျား(လျှာထိပ်) မထိုးကြတာ..။ နားထောင်ရတာ ရယ်ချင်စရာကြီး..။
ကျွန်တော်ကတစ်ခြားဒေသကလူတွေက ကျွန်တော့်နာမည်ကို ငသတ်သံနဲ့ရယ်စရာစကြတော့ အိမ်ကိုပြန်ပြောပြဖြစ်တယ်..။ ပြောနေတုံး ကျွန်တော်တို့ဒေသမှာပဲမွေး အဲဒီဒေသမှာပဲ ကြီး တစ်နယ်ရပ်ခြားသွားခဲတဲ့ အပျိုကြီးမကြီးကို ကျွန်တော့်နာမည်ကိုခေါ်ခိုင်းကြည့်တယ်..။ ခပ်တည်တည်ပဲ ငသတ်သံနဲ့ပဲထွက်လာတယ်..။ လွဲနေတာ မျိူးဆက်၁၀ဆက်လောက်ရှိပြီလို့ ပြောရမလားပဲ..။
မန္တလေးမှာတွေ့တဲ့ ပျဉ်းမနား၊ နေပြည်တော် တပ်ကုန်းဒေသကလူတွေက ရှ နဲ့ ချ နဲ့ လွဲနေကြသလား..၊ အားလုံးကို ရှ သံပဲ ထွက်နေကြသလားတော့ မပြောတတ်ဘူး..။ ချစ်တယ်ဆိုတာကတော့ ရှစ်တယ်ပဲ...။ ရှစ်ပြောရင်တော့ ချစ်ထွက်သလား မသိဘူး..။ ချဉ်တာလည်း ရှဉ်တာပဲ...။ ဘလော့တစ်ခုထဲမှာဖတ်ဖူးတယ်..။ စလုံးမှာမွေးတဲ့ကလေးကို ပျဉ်းမနားကအဒေါ်ကိုလှမ်းခေါ်ပြီးထိန်းခိုင်းတာ အဒေါ်နဲ့အနေများတဲ့ကလေးက အဒေါ်ဆီကနေရယ်..၊ အဖေဆီကနေရယ်..၊ အဒေါ့်သား အစ်ကိုဝမ်းကွဲကနေရယ် ရှစ်တယ်..၊ ရှဉ်တယ်..ဆိုတာတွေပဲကြားနေရတော့ အမေ့မှာ ဘယ်လိုပြင်ပေးပေး မရဘူးဖြစ်နေတာဆိုတာ ရယ်စရာအနေနဲ့ရေးထားတာ တွေ့ဖူးတယ်..။
အဲဒါကြောင့် စကားပြောတာနားထောင်ရင် ဒေသကိုမှန်းနိုင်တယ်ဆိုတာ ဖြစ်နေတာပေါ့..။ ချနဲ့ရှကို ဒေသနဲ့ချီပြီးမှားတဲ့အမှားကတော့ ဆိုးလွန်းသလားလို့..။ ဘယ်သူတွေဆီက ရတာလဲဆိုတော့ ဆရာမတွေကလည်း ရှလို့အသံထွက်ပြီးသင်တာပဲလို့ ပြောတာကြားဖူးတယ်..။ အဲဒီဒေသကတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်ဖူးတာပါ..။ ကျောင်းမှာကို ဆရာမက ရှသံထွက်ပြီးသင်တယ်တဲ့..။ ဒါပေမယ့် ဒေသခံမဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားဒေသကဆရာမတွေလည်း ရှိတာပဲဆိုတော့ အိမ်မှာ မိသားစုထဲမှာ ရှနဲ့ပြောတော့ တစ်ခြားဒေသကလာတဲ့ဆရာမတောင် နောက်ပိုင်း ရှ သံဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ..။ ဘာပဲပြောပြော ကျောင်းသားမမှန် ဆရာ့ခေါင်း..၊ သားသမီးမမှန် မိဘခေါင်းဆိုတော့ ဆရာမိဘ ပေါင်းထိန်းကြမှ အမှန်ရောက်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်..။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 4/20/2013 11:37:00 am0comments
Posted by ကြည်မြန်မာ at 2/11/2013 11:44:00 pm6comments